‘पिञ्जुको रेशमी फ्रक’ पढेपछि – Ketaketi Online
– अरुणबहादुर खत्री नदी
पिञ्जुको रेशमी फ्रक नामक बालकथा सङ्ग्रह साहित्यकार प्रा.डा. गार्गी शर्माको २०७४ सालमा प्रकाशित कृति हो । यस सङ्ग्रहभित्र दाँतमा पनि किरा लाग्छ, जन्मोत्सवमा के उपहार दिऊ छोरी ? पिञ्जुको रेशमी फ्रक र रमाइलो मित्रको दुःख शीर्षकका चारवटा बालकथाहरु रहेका छन् । यी कथाहरु विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित छन् ।
यस सङ्ग्रहभित्रको पहिलो बालकथा ‘दाँतमा पनि किरा लाग्छ’ मा दीपक किन हिजो किन स्कुल नआएको ? सञ्चो भएन कि ? प्रकाशले प्रश्न गर्छ र मेरो दाँतमा किरा लागेछ । रातभरि दुखेर सहनै सकिन त्यसैले हिजो बाबाले डाक्टरकोमा लैजानुभयो । त्यहाँ धेरैबेर लाग्यो र स्कुल आउन सकिन भनी दीपकले जवाफ दिन्छ । दीपकले पथरिया भनेको गिजा पाक्ने रोग हो । सुरुसुरुमा दाँतबाट गिजाबाट रगत आउँछ र बेलैमा उपचार गरेन भने पीप आउँछ र दाँत हल्लेर झर्छ । दाँतको घर गिजा हो भन्ने कुरा यस कथामा भनिएको छ । ‘जन्मोत्सवमा के उपहार दिऊ छोरी ?’ शीर्षकको बालकथामा उषा स्कुलमा निकै नै फुर्तिली छिन् । आफ्नो पाठ सधैँ तयार गर्छिन् । स्कुलमा सरमिसहरुले पढाएको ध्यान दिएर सुन्छिन् । आफूले नबुझेको कुरा गुरुहरुलाई ज्यादै विनम्र भएर सोध्छिन् भनिएको छ । उषाको मिसले उषालाई तिम्रो ममीबाबालाई तिम्रो जन्मोत्सवको खुसियालीमा रक्तदान गर्नोस् भनेर सम्झाऊ । भोलि शनिबार हाम्रो यही स्कुलमा रक्तदान कार्यक्रम छ । हामी सबै मिस र सरहरुले रक्तदान कार्यक्रम गर्दैछौँ । भोलि तिमीहरु पनि हेर्न आउनु भनी सम्झाउनु भयो भनिएको छ ।
सङ्ग्रहको नामसँग मिल्दो ‘पिञ्जुको रेशमी फ्रक’ शीर्षकको बालकथामा पिञ्जुलाई सधैँ आफ्नो जन्मोत्सव आइरहोस् । स्कुलमा साथीहरु र शिक्षकहरुलाई चकलेट बाँड्न पाइरहुँ, केक काट्न र उपहार लिन पाइरहुँ लाग्छ । त्यसैले एउटा जन्मोत्सव सकिन नपाउँदै अर्को कहिले आउँछ भनेर पर्खिरहन्छिन् । उनी मात्र होइन उनका साथीहरु पनि त्यस्तै छन् । कक्षामा प्रायः हरेक महिनामा कुनै न कुनै साथीको जन्मदिन आइरहन्छ । रमाइलो भइरहन्छ । पिञ्जुको शुभ जन्मोत्सवको बिहानै आमाले नानू पिञ्जु हेप्पी बर्थडे शुभजन्मोत्सवको बधाई भनि पिञ्जुलाई उठाउनु भयो । खुसीले प्रफुल्ल पिञ्जु आँखा मिचेर उठ्दै धन्यवाद मामू भन्दै आमालाई गम्लङ्ग अँगालो हालिन् भनिएको छ ।
यस सङ्ग्रहभित्रको ‘रमाइलो मित्रको दुःख’ शीर्षकको अन्तिम बालकथामा धुर्व माथि जान लाग्दा सरिताले सोनम यही छन् भनेर कोठा खोलिदिइन् । धुर्वलाइ देखेर सोनमका बुबाले भन्नुभयो ए धुर्व आयौ, भित्र आऊ न । आफ्नी आमाछेऊ बसिरहेका सोनमले पनि उठेर ए धुर्व आऊ यता भनेर बोलाए भनिएको छ । दुबैजना गफमा मस्त भए । । धुर्वले भने स्कुल किन नआएको सोनम ? तिमी नआएर आज एक्लै खाना खान पनि मन लागेन । मिसले पनि सोनम किन आएनन् भनी सोध्नुभयो भन्नुभएकाे कुरा यस कथाभित्र भनिएको छ ।
वरिष्ठ लेखक गार्गी शर्मा
वैज्ञानिक, सामाजिक, पौराणिक र पारिवारिक विषयवस्तुलाई यी कथाहरुमा प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालको विविधतामय भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशको झल्को पनि यी कथाहरुमा पाइन्छ । नेपाली बालसाहित्यको आँगनमा उभिएर लेखेको यो उनको तेस्रो कृति हो । यस विषयमा कलम चलाउन उनको प्रेरणाको स्रोत हो कण्ठू राजा (बिरालो) । लेखिकाको घरमा झण्डै दशवर्षसम्म एउटै बिरालोको सन्तान दरसन्तानले ढाकेका थिए रे ।
नेपाली बालसाहित्यमा यो बालकथासङ्ग्रहलाई एउटा गुणात्मक दृष्टिले अत्यन्त मार्मिक र स्तरीय कथासङ्ग्रहको रुपमा लिनसकिन्छ । कथाहरुमा विज्ञानलाई जोड दिइएको यथार्थवादी, विविध क्षेत्र र विषयलाई समेटिएका छन् । अझ साच्चिकै भन्ने हो भने विज्ञानका सूक्ष्म प्रस्तुति भन्नसकिन्छ । यस कथासङ्ग्रहभित्रको बालकथाहरु हाम्रा प्यारा भाइबैनीहरुलाई ज्ञानवर्धक खालका छन् । स्कुलमा पढ्ने भाइबैनीहरुले प्रा‍‌‍‌डा गार्गी शर्माले लेखेको यो बालकथासङ्ग्रह पढ्न उपयुक्त छ ।
बालसाहित्यले नयाँ ज्ञान र सीप सिकाउछ । असल चरित्र निर्माण गर्ने प्रोत्साहन गर्छ । सत्मार्गतर्फ लैजान्छ । हरेक मानिसको जीवनमा बाल्यकालका भोगाइ र अनुभव अत्यन्तै रोचक हुन्छन् । बालकथाले रमाइलो ढङ्गले बालबालिकालाई धेरैभन्दा धेरै ज्ञानगुनका कुरा सिकाउँछ । जुन कुरा हामीले यत्तिकै भनेर सिकाउन सकिरहेका हुँदैनौ वा बालबालिकाले नै ती कुरा बुझ्न सकिरहेका हुँदैनन् । बालकथामा कलम चलाउने गार्गी शर्माले बालबालिकालाई अझ बढी माया गर्छिन् । उनकाे लेखनी बालमैत्री छ । यस सङ्ग्रहको प्रकाशक गौरी पब्लिक रिलेसन एन पब्लिकेसन काठमाडौं हो । पृष्ठ संख्या ३२ र मूल्य रु. ६५।– राखिएको छ ।